Снимки около Дака - meteoblue
Снимки около Дака
Dhaka Division, Бангладеш, 23.71°С 90.41°И 23м. надм.
09.05.2018 г., 16:30
Mingin, Sagaing Region
09.01.2018 г., 02:37
( ဇွန်လ ၁၂ ) နံနက် အစောပိုင်းက လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ် ( ၅၂)လုံးခန့် ပျက်စီး
12.06.2017 г., 06:15
Ponnagyun, Rakhine State
မိုရာ​ကြောင့်​အိမ်​​ခြေ ၂၀၀၀၀ နီးပါးပျက်​စီးထိခိုက်​မှုများရှိခဲ့ ဟု အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန် ​နေပြည်​​တော်​၊ ဇွန်​ ၂ ​မေလ ၃၀ ရက်​​နေ့က တိုက်​ခိုက်​ခဲ့တဲ့မိုရာမုန်​တိုင်း​ကြောင့်​ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​အတွင်းက ဘူးသီး​တောင်​​၊​မောင်း​တောအပါအ၀င်​မြို့နယ်​ ၁၅ မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းက ​မော်​လမြိုင်​ကျွန်း ၊ဖျာပုံနှင့်​ငပု​တော၊ ချင်းပြည်​နယ်​အတွင်းက ဟားခါး၊ထန်​တလန်​နှင့်​ဖလန်းမြို့တို့က အပျက်​အစီးစာရင်း​တွေကို လူကယ်​ပြန်​၀န်​ကြီးဌာနက ယ​နေ့မနက်​ပိုင်းမှာထုတ်​ပြန်​​ကြေညာခဲ့သည်​။ အိမ်​​ခြေ ၄၇၀၀ နီးပါးလုံးဝပျက်​စီးခဲ့ပြီး တစိတ်​တစ်​ပိုင်းပျက်​စီးခဲ့သည့်​အိမ်​​ခြေအ​ရေအတွက်​က ၁၃၅၀၀ ​ကျော်​ ရှိခဲ့​ကြောင်း ၊ လုံးဝပျက်​စီးခဲ့သည့်​ဘာသာ​ရေးအ​ဆောက်​အအုံအ​ရေအတွက်​နှင့်​ တစိတ်​တစ်​ပိုင်းပျက်​စီးခဲ့သည့်​ဘာသာ​ရေးအ​ဆောက်​အအုံအ​ရေအတွက်​က ၅၀၀ နီးပါးရှိ​ကြောင်း ၀န်​ကြီးဌာနက ဆိုသည်​။ ပျက်​စီးထိခိုက်​မှုရှိသည့်​စာသင်​​ကျောင်းအ​ရေအတွက်​သည်​ ၃၀၀​ကျော်​ ရှိခဲ့သည့်​အပြင်​ ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်း​ပေါင်း ၃၀နီးပါးလည်းထိခိုက်​ပျက်​စီးမှုရှိခဲ့​ကြောင်းဝန်​ကြီးဌာနစာရင်းများအရထပ်​မံသိရသည်​။ 20,000 house damage by Mora Cyclone . https://www.facebook.com/popularnewsjournal/posts/1772845126064608
30.05.2017 г., 11:25
30.05.2017 г., 06:40
monastery5Gov office4School house5House 20 Damage Animals are Death . ဘုန်းကြီးကျောင်း(၅) ကျောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ(၄)လုံး ၊ စာသင်ကျောင်း(၅)ဆောင်၊ လူနေအိမ် (၂၀)လုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး တိရစ္ဆာန်များလည်း သေဆုံးခဲ့ေ
30.05.2017 г., 01:33
wind 50 Mph
29.05.2017 г., 18:00
Begin Mora Cyclone
29.05.2017 г., 15:38
Sabai Pan take photo and send me. အင်္ဂါနေ့ ဂန့်ဂေါနှင့်ရေဇွာကြား ဂန့်ဂေါမှမိုင် ၅၀ အကွာ ဓါတ်ပုံပါ
16.05.2017 г., 23:31
16.05.2017 г., 19:21
Kani, Sagaing Region
Two person death by Home damage by hard wind North direction to south Direction. Time id 16;30 to 17,30 . Priminister went to help wounded person . မိုးသက်လေပြင်းသည် ညနေ ၄ နာရီ ခွဲ ခန့်က ကျရောက်ပြီး ကနီမြို့ ရပ်ကွက် (၃) တွင် ထိခိုက်အပျက် အစီးများကာ နေအိမ်များပြိုကျသကဲ့သို့ ဓာတ်တိုင်များလည်း လဲကျကြောင်း သိရသည်။ '' သားအမိသုံးယောက် အိမ်ပိတယ်။ ဆေးရုံတင်တယ်။ သားဖြစ်သူက သေသွားပြီ။ ကျန်တဲ့ သမီးနဲ့အမေလည်း ဒဏ်ရာပြင်းတယ်'' ဟု မြို့ခံ တစ်ဦးက မုံရွာဂေဇက်ကို ပြောသည်။ Video https://www.facebook.com/elevenbroadcasting/videos/1902243840032091/?hc_ref=NEWSFEED
14.05.2017 г., 16:45
100% Right . Report from Min Bo Works at Construction at Tamu.
27.04.2017 г., 13:30
Tamu, Sagaing Region
24 April 2017 12:45 begin ( Heavy Rain with wind in Summer Myanmar) ကလေးမြို့ 23.19°N 94.06°E
24.04.2017 г., 14:15
Kalemyo, Sagaing Region
24.04.2017 г., 13:15
Kalay Airport, Sagaing Region
24.04.2017 г., 12:45
Khine Khine Oo take photo
22.04.2017 г., 16:48
Kalewa, Sagaing Region
After Heavy rain , Begin landslide . Source https://www.facebook.com/khine.khineoo.1650/posts/322363251437804
09.08.2016 г., 12:30
28.07.2016 г., 14:26
Homalin, Sagaing Region
Pauktaw area have not enough drink water every year
30.04.2016 г., 16:08
Pauktaw, Rakhine State